Duliyayaasha diyaaradaha qaranka oo ku goodiyay shaqo joojin qaran – The Voice of Northeastern Kenya
Duliyayaasha diyaaradaha qaranka oo ku goodiyay shaqo joojin qaran
Duliyaasha diyaaradaha qaranka ee Kenya Airways ayaa ku goodiyay in ay qalabka iska dhigi doonaan hadii sida ugu dhaqsiyaha badan aan loo fulinin waxyaabaha ay tabanayaan mise ka cabanayaan.
Ururka ay ku bohooben duliyaasha ayaa siiyay dowlada muddo dhan 7 malmood si ay ku badasho Mas’uuliyiinta iyo hogaamiyayaasha sar sare ee shirkaddaasi.
Xoghayaha ururkooda Paul Gichinga ayaa maanta oo talaada ahayd warbaahinta u sheegay in aysan ku faraxsaneyn qaabka loo hogaaminaayo maadama ay jiraan wax isdawa marin iyo hogaan xumo.
KALPA oo ah ururka duliyaasha ayaa sheegay in talaadada soo socoto oo ay taariqdu ku beegan tahay 18-ka bishan Oktobar ay ku dhaqaaqi doonaan godood shaqo joojin ah oo ay uga cabanayaan maamul xumada haysata.
Ururkan ayaa waxay sheegen in aysan jirin talaabooyin dib loogu soo celinayo kalsoonidii lagu qabay shirkaadaasi diyaarada ah waxayna howlgalka lagu doonayo in dib loogu soo celiyo sumcada shirkada ku sheegen mid aan daacad ahayn.
Goor sii horeysay ayay ahayd marki mudaneyaal ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalka ayaa dalbaday in baaritaan lagu sameeyo mushkiladaha dhinaca dhaqaalaha ee ay wajaheyso shirkadda diyaaradaha qaranka ee Kenya Airways.
Xildhibaannada ayaa ka dhawaajiyay in la xaqiijiyo cilladaha ka yimid dhinaca maamulka iyo kuwa qandaraasyada dibadda ee ay sameysay shirkadda KQ.
← Kenya iyo Konfur Africa oo heshiisyo dhowr ah kala saxiixday
Xildhibaanka Degmaada Nyando oo caawa sexanaya xabsi →